galmudugnews.com » Wasaarada Amniga oo sheegtay Ciidamo labisan iyo kuwa aan labisneyn geysay meelo ka mid ah Caasimada
Home » WARARKA » Wasaarada Amniga oo sheegtay Ciidamo labisan iyo kuwa aan labisneyn geysay meelo ka mid ah Caasimada Wasaarada Amniga oo sheegtay Ciidamo labisan iyo kuwa aan labisneyn geysay meelo ka mid ah Caasimada galmudug on
Sep 26th, 2012 //
No Comment Views 16283 Wasaarada Arrimaha gudaha iyo Amniga qaranka ayaa sheegay in Ciidamo ay ku kordhisay degmooyin ka mid ah Gobolka Banaadir, si ay ammaanka u xaqiijiyaan, kadib dilal qorsheysan iyo qaraxyo maalmihii u dambeeyay ka dhacayay magaalada Muqdisho.
C/samad Macalin Maxamuud oo ah sii hayaha Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga qaranka ayaa sheegay in Ciidamo labisan iyo kuwa aan labisneyn ay geeyeen baro ka mid ah magaalada, si ammaanka loo xaqiijiyo.
“Meelaha qaar ciidankii horay u joogay ayaa lagu kordhiyay, waxaa la geeyay baro cusub ciidamadana ay dageen, waana arrimo loogu tala galay wixii imaan kara looga hortago, ciidanka waxaa uu isugu jiraa kuwo labisan iyo kuwo aan labisneyn”ayuu yiri C/samad oo la hadlay Idaacada Radio Muqdisho.
Waxaa uu sheegay inay socoto wali qorshayaal loogu tala galay in lagu xasiliyo amniga magaalada, waxaana uu sheegay in Ciidamada haatan lagu arki doono goobo aan horay loogu arkin.
Mar uu ka hadlay falalkii dhowaanahan ka dhacayay magaalada ayaa waxaa uu sheegay in muhiim tahay in shacabka iyo Ciidamada ammaanka ay wada shaqeyn dhex marto, si looga hortago wax kasta oo dhaca.
Dhinaca kale waxaa uu Wasiirku sheegay in go’aamo adag laga soo saaray rasaasta maalayacniga ee ay ridaan Ciidamada, isagoo xusay in askarigii shacabka dhexdiisa rasaas ku dhex rida tallaabo laga qaadi doono.
“Go’aamo adag ayaa laga gaaray inaan la isticmaalin karin xabadaha aan loo meel dayin, lana ogolaan karin, taliyaasha ciidamada go’aan ayay ka gaareen in aan maalin cad magaalada dhexdeeda xabad lagu ridin, waa arrin sharciga waafaqsaneyn, ciidan dareys wata inuu rasaas rido”ayuu yiri.
Shalay ayay aheyd markii magaalada Muqdisho ay is qabsatay rasaas xoogan markii ay soo baxeen warar sheegayay in Ra’iisul Wasaare loo magacaabo Maxamed C/llaahi Farmaajo oo taageero ka heysta Ciidamada dowladda.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21143 hitsContact US - 19981 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19562 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16375 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16188 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14877 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14339 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14305 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14006 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13781 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12871 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12658 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12613 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12333 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12067 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11959 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11682 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11602 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11590 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11579 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11462 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11317 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11255 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11247 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11039 hits Home About